Sidee gaadiidka dadweynaha ay ugu jiri doonaan Istanbul muddo 4 maalmood ah? Iskuxirka Metrobus iyo Ferry Work? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSidee gaadiidka dadweynaha ay ugu jiri doonaan Istanbul muddo 4 maalmood ah? Iskuxirka Metrobus iyo Ferry Work?
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka
Sidee gaadiidka metroga iyo baarruufka ay uga shaqeyn doonaan Istanbul inta lagu jiro maalinta?
Bandoowga, oo lagu dhawaaqay waqtiyada u dhaxeeysa faafitaanka Covid-19, waxaa sidoo kale lagu dabaqi doonaa 16-ka ilaa 19-ka May. In kasta oo dadka daggan Istanbul ay guryahooda ku sugan yihiin kadib bandoowga oo xannibmay muddo 4 maalmood ah, inbadan oo ka mid ah hayadaha İBB iyo kuwa ku shaqeeya ayaa sii wadi doona howlahooda iyagoon carqalad laheyn, si magaalada nabad looga dhigo oo ay uga shaqeyso kala go 'aan. Iyada oo haysata fursad ay si raaxo leh uga shaqeyso wadooyinka magaalada iyo jidadka bandoowyada lagu dhawaaqay xilli hore, IMM waxay fursad u heli doontaa inay ku dhammaystirto mashaariicda ay fuliso 11ta maalmood ee soo socota.
Iyada oo la eegayo baaxadda tallaabooyinka faafa ee 'Covid-19', ayay Dawladda Hoose ee Magaalada Caasimadda (IMM) waxay sii wadi doontaa adeegyadeeda dadka deggan Istanbul iyada oo 16 shaqaale ah inta lagu jiro bandowga 19-maalmood ah, oo dhaqangelaya inta u dhexeysa 4-11 May. Marka lagu daro baahiyaha aasaasiga ah sida gaadiidka, biyaha, gaaska dabiiciga ah iyo rootida, İBB, oo sii wadi doonta adeegyadeeda amniga iyada oo la adeegsanayo khudaarta, miraha, daryeelka waayeelka iyo naafada, adeegyada aaska, tuurista qashinka caafimaadka iyo qashinka adag, kooxda nadaafadda mobilada, ALO 566, howlaha dhismaha, ma waayi doono. Bandowyadii horey loo shaaciyay, IMM waxay fursad u heshay inay si dhakhso leh ku dhammeysato iyadoo uga mahadcelineysa horumarka gaabiska ah ee mashaariicda ay gaadiidku iyo kuwa lugeynayaba aad u xooganaa, taasoo uga mahadnaqday dhismooyinka iyo jidadka magaalada. the İSKİ KadıköySeyit Ahmet Creek, qaar ka mid ah mashaariicda laga fuliyo xeebta Ortaköy ayaa la dhammeystiri doonaa horaanta waqtiga la qorsheeyay in la dhammaystiro waxaana la hawl geli doonaa dhamaadka bisha Juun.
KA QAADAN KARO SHAQAALAHA SHAQADA IYO CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA
Kooxaha nadaafadda guur-guura ee waaxda Caafimaadka IMM waxay sii wadi doonaan howlahooda nadaafadeed ee xarumaha dowladda iyo isbitaallada. Joogtada ka hortaga jeermiska, 10 shaqaale ah waxay sii wadi doonaan adeegyadooda 5 maalmood iyagoo wata 4 gaadiid iyo jeermiska gudaha, 64 shaqaale ayaa sii wadi doona adeegyadooda Sabtida, Axadda iyo Isniinta iyagoo wata 30 gaadiid. Si loola dagaallamo kaneecada ay sababaan cimilada, ayaa 412 shaqaale ah ay maalinta isniinta ah ka sameyn doonaan hawlo buufin ah.
İBB, oo sii wadi doonta adeegyadeeda daryeelka caafimaad ee Isniinta iyo Talaadada, oo ay la socdaan 182 shaqaale ah iyo 69 gaadiid ah, ayaa u adeegi doonta Adeegyada Caafimaadka Maskaxda ee Bulshada 15 shaqaale, 3 dhakhaatiir cilmi-nafsi iyo 76 cilmi-nafsi yaqaanno muddo 4 maalmood ah.
ISKUULADA SII SAAR
Goobaha baarkinka İSPARK waa la xirayaa 4 maalmood. Si kastaba ha noqotee, si looga fogaado wixii dhibaatooyin ah muddada xannibaadda, 203 shaqaalaha ISPARK ayaa gabi ahaanba ka mid ah, oo ay ku jiraan Agaasinka Guud, Gawaarida qaar Open iyo Storey Car Park, Alibeyköy Cep Bus Station P + R, İstinye iyo Tarabya Marina, Suuqa Qudaarta Khudradda Bayrampaşa iyo Suuqa Khudaarta Khudaarta. waajibaadka ku jiri doona.
ISKI Waxay U TAHAY DHAQANKA SHAQADA EE SHAQADA
Goobaha bandoowga, İSKİ wuxuu heystaa fursad uu ku shaqeeyo si ka sii raaxo badan sababtuna tahay baabuurta culus iyo taraafikada dadka. Mashaariicda, oo la soo gabagabayn doono waqti aad u dheer, si dhakhso leh ayey horumar ku dheehan tahay iyagoo uga mahadnaqaya waddooyinka nasashada iyo jidadka. Xayiraadda 4ta maalmood ee bandoowga, İSKİ wuxuu shaqadiisa ka fulin doonaa 5 goobood oo kala duwan oo ku yaal magaalada Istanbul dhanka biyaha wasakhda ah, biyaha roobka, horumarinta biyaha iyo cabitaanka biyaha, oo ay gaarayaan 850 shaqaale ah.
WAXYAABAHA KU SAABSAN İSKİ UU SHAQO
Besiktas Barbaros Boulevard, Besiktas Ortaköy, Besiktas Şair Nedim Caddesi, Besiktas Nisbetiye Caddesi, Zeytinburnu 10. Yıl Stream, Bakırköy Kennedy Caddesi, Bakırköy Istanbul Caddesi, Bakırköy Yeşilköy, Bakırköy Galeria AVM, Avcılar Saadetdere, Şişli Akar Caddesi, Şişli Dolapdere Caddesi, Eyüp Haliç -Yavedüt Caddesi, Beyoğlu Dolapdere Caddesi, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi.
Pendik Ankara Caddesi (Wadada Diyaaradaha Sabiha Gök )en), Kartal Meydan, Kartal Cengiz Topel Caddesi, Kartal Karlıktepe, Kadıköy Dock, Kadıköy E-5 Kaabis, Kadıköy Dinlenç Creek, Üsküdar Beach, Üsküdar Square, Üsküdar Libadiye Caddesi, Ümraniye Tantavi Tunnel Underpass, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Beykoz Ali Bahadır Creek, Ataşehir Libadiye Caddesi, Tuzla Birlik OSB.
MAGAALADA WUXUU FUDUDI doonaa, MADAXBADAHA CAAFIMAADKA LAGU SAMEEYNAA IYO WAAJIBAAD
İSTAÇ, dhaqitaanka mashiinka, dhajinta farsamada iyo xaaqinta mashiinka meelaha dadweynaha sida wadooyinka waa weyn, jidadka, Marmaray iyo iridaha dhulka hoostiisa, marinnada - wadooyinka dhulka hoostiisa mara, basaska / boosteejooyinka, Gobollada Bayrampaşa iyo Ataşehir, isbitaallada iyo hay'adaha dowliga ah iyo ururada kala duwan. wuxuu sii wadayaa howlaha nadaafadda gacanta 4 maalmood oo aan kala go ’lahayn.
Hawlaha nadaafadda ee ay fulinayaan İSTAÇ 4 maalmood, aagga 2 milyan 162 kun 580 mitir murabac ah (cabirka qiyaastii 303 garoomada kubbadda cagta) ayaa la dumin doonaa, iyo bedka 16 milyan 555 kun 80 mitir oo laba jibbaaran (oo qiyaastii u jirta 2 kun 319 garoomada kubbadda cagta) ayaa lagu nadiifin doonaa iyadoo lagu nadiifinayo qalab farsamo. .
QORSHAYAASH GAAR AH
İSTAÇ, inta lagu jiro maalinta shaqada ee Maajo 16-17-18-19, waxay ku maydhan doontaa waddooyinka qabuuraha iyo nawaaxigeeda qaybta underBB xabaalaha xabaalaha, kuwaas oo ku habboon shaqada dhaqitaanka mashiinka, waxayna ku wareejin doonaan kooxaha gacanta ka nadiifinta dhibcaha baabuurta aysan geli karin. Dhamaadka afarta maalmood, gawaaridu waxay noqon doonaan 4 jeer 141 shaqaalena waa ku jiri doonaan.
QASHINKA QAARKA IYO SHAQAALAHA SHAQADA
Dhinaca Aasiya iyo Yurub, qiyaastii 245 tan oo wasaqda qashinka ah, oo ay kujiraan guryaha karantiillada, waxaa aruurin doona 4 baabuur oo ay gaarayaan 323 shaqaale 55 maalmood gudahood. 93 shaqaale ayaa ka shaqeyn doona tuurista. Tirada shaqaalaha 'ÇSTAÇ' oo shaqeyn doona 4 maalmood waxay noqon doontaa 6 775.
MA JIRO DHIBAATOOYINKA DHAQANKA
İGDAŞ waxay la shaqeyn doontaa 7 24 oo shaqooyin kala geddisan, gaar ahaan 187/4 kooxaha Gurmadka degdega ah, 883 Xarunta Taleefanka Degdegga ee Gaaska Dabiiciga ah iyo kooxaha saadka, si loo gaarsiiyo gaaska dabiiciga ah si joogto ah oo nabad ah dhammaan Istanbul.
SHAQAALAHA MA QAADAN KARO
Waxay u adeegi doontaa 621 shaqaale gudaha Khadadka Magaalada, maraakiibta, maraakiibta iyo Haliç Shipyard. Inta lagu guda jiro 4 maalmood, wadar dhan 15 socdaal ayaa lagu fulin doonaa 11 berth, 1 markab, 6 markab iyo 382 fuuq-bax.
Khadadka loo adeegayo:
IETT waxay samayn doontaa 4 kun 42 safar muddo 340 maalmood gudahood ah. Wadarta 91 gawaarida ayaa loo qoondeyn doonaa 141 isbitaal dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay.
Waxaa la go’aamiyay in lagu dabaqo bandow 4 maalmood, Sabti, Axad, Isniin iyo Talaado. Muwaadiniin badan, sida kuwa ka shaqeeya adeegga dadweynaha, xirfadlayaal daryeel caafimaad, farmashiisteyaal, kuwa wax lagu dubiyo, ayaa sii wadi doona inay aadaan shaqooyinkooda inta lagu jiro maalmaha xannibaadda. IETT waxay sii wadi doontaa duulimaadyadeeda illaa iyo 01:00 habeenimada Arbacada dadka reer Istanbul oo ay tahay inay shaqada aadaan. Labada maalmood ee ugu horreeya bandoowga, oo ah, Sabtida iyo Axadda, 494 ayaa la balaarin doonaa iyadoo la adeegsanayo 488 xitaa 8 gawaarida. Isniinta iyo Talaadada, 358 kun 494 duulimaad ayaa lagu abaabuli doonaa 512 xitaa 12 gaadiid. Gawaarida tafaariiqda ayaa loo hayn doonaa codsiyada degdegga ah ee ku yaal khadadka, oo haddii baahi timaado, waxaa loo diri doonaa khadadka la xiriira.
Intaa waxa u dheer, wadar ahaan 4 cisbitaal oo gaar loo leeyahay iyo kuwa dawladeed ayaa loo qoondeeyay gawaarida afarta maalmood ee xayiraada la qaaday. Wadarta 91 gawaarida ayaa loo xilsaaray inay u adeegaan shaqaalaha cisbitaalka sabtida, axada, isniinta iyo talaadada.
Khadka Metrobus, waxaa jiri doona diyaarad 06 daqiiqo ah inta u dhaxaysa 10 subaxnimo ilaa 3-ka subaxnimo Sabtida iyo Axadda. Waxaa jiri doona socdaal u dhexeeya 10 iyo 16 10kii daqiiqoba. Mar labaad, inta u dhaxaysa 16 ilaa 20 safarro ayaa la sameyn doonaa 3 daqiiqo kasta. Duulimaadyada 20 ilaa 24 ayaa la qaban doonaa 15 daqiiqo kasta.
Isniinta iyo Talaadada, waxaa jiri doona safar kasta 06 daqiiqo kasta inta u dhexeysa 10 iyo 3 subaxnimo, 10 daqiiqo kasta inta u dhexeysa 16 iyo 10, 16 daqiiqad walba inta u dhexeysa 20 iyo 3, iyo 20 daqiiqo kasta inta u dhexeysa 01 iyo 10.
MADAXWEYNAHA GUUD EE METROBUS
Waqtiga Meey 16-17 Meey 18-19
06: 00 - 10: 00 3 daqiiqo 3 daqiiqo
10: 00 - 16: 00 10 daqiiqo 10 daqiiqo
16: 00 - 20: 00 3 daqiiqo 3 daqiiqo
20: 00 - 00: 00 15 daqiiqo X
20: 00 - 01: 00 X 10 daqiiqo
Inta lagu jiro bandowga 4-maalmood, Boğaziçi Yönetim AŞ wuxuu garoonka ku jiri doonaa qeybaha adeegga İBB, xiriirada iyo aagagga ay deggan yihiin dadka reer Istanbul, oo ay ka kooban yihiin 102 qof oo isugu jira shaqaale farsamo iyo nadiifin.
Intaas waxaa sii dheer, waalidiinta oo waqti ku qaadan doona guriga xannibaadda awgeed, Khabiirka cilmu-nafsiga ee cilmu-nafsiga Ceyda Website ayaa la kulmi doona dhagaystayaasha iyagoo la sheekeysan doona nuxurka "Caruurta iyo maareynta walwalka inta lagu jiro muddada cudurka Faafa" ee ka baxa telefishanka tooska ah ee Boğaziçi Yönetim Instagram maalinta Axadda saacaddu markay tahay 16:00.
SHAQAALAHA SHAQAALAHA AYUU UGU JIRAAN
İSTON, Hacı Osman Grove, muuqaalka muuqaalka, Kadıköy Dhismaha Wadada Iskuxiran ee Gawaarida Caalamiga ah ee loo yaqaan 'Kurbağalıdere Yogurtçu Park Sea iyo dhul-gariirka u dhexeeya Moda, Atatürk Ciyaaraha Olombikada Olombikada, Beylikdüzı iyo Avcılar wuxuu dhaafayaa dayactirka iyo hagaajinta, Dhismaha Wadada Weyn ee Magaaladda Istanbul Gawaarida weyn, Göztepe Metro Station, Kağıthane Station Station Entrance Pavement Arrangement, Giyimkent Street-Waqooyi Wadada la xoojiyay ee la taaban karo ee wadada laamiga ah iyo Jidka isku xirka, Saldhigga Yeni Mahalle, Saldhigga Karadeniz Mahallesi, muuqaalka dhulka, Gawaarida Xarunta G Centerngö Kale, Isuduwaha wadada Istaatiga ITAT, IETT Garage iyo Havaist Platform Areas Arrangement, Aycice Street Concrete Pavement Pavement Pavenue Distance, Saltuk Dhismaha Wadada Mashiinka Wadada ee Laamiga ah ee Magaalada Bu Streetrahan, Dhismaha Wadada Bağlar Caddesi, arrangementamlar Caddesi, Dhismaha derbiga, Sarestyer Özdereiçi dhismaha darbiga, Beylikdüzü Cemevi wadooyinka wadada ayaa laga sii wadi doonaa inay ka shaqeeyaan goobaha dhismaha ee magaalada.
Shaqada sidoo kale waxaa lagu fulin doonaa dayactirka iyo dayactirka mashruucyada jardiinooyinka carruurta ee kaladuwan ee hoos yimaada Agaasinka Beeraha iyo Xadiiqadaha. Xaaladda guud, wadar ahaan 779 ISTON iyo shaqaale hoosaad ayaa ka shaqeyn doona. Intaa waxaa u dheer, wax soo saarka ayaa lagu fulin doonaa iyada oo aan wax carqalad ah laga dhex sameyn doonin İSTON Hadımköy iyo warshadaha Tuzla inta u dhexeysa 16-19 May.
17 Kumanaan 840 TON ASPHALT XARIIQADA LAGU SAMEEYO
İSFALT waxay garoonka la joogi doontaa 853 shaqaale ah si ay u fuliyaan wax soo saarka asphalt iyo howlaha codsashada dhir-ka-shaqeynta iyo 260 shaqaale ah oo ku hawlan ka-hortaga cudurka.
Daraasadaha lagu sameeyo geedi socodkan; Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kadıköy, Büyükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar iyo Bakırköy. Wadarta 17 tan oo dalab asphalt ah ayaa la qorsheeyay.
AAWAYNTA CUNTADA MA UGU Kordhinayso
270 gaari, 270 shaqaale darawal ah, 270 shaqaale bulsheed iyo 270 shaqaale caawiya ayaa u adeegi doona gaarsiinta xirmooyin mucaawino ah muwadiniinteenna baahan ee ay go'aamisay Agaasinka Adeegyada Bulshada.
Gaadiidka, warshadda korantada, kafateeriyada iyo adeegyada jeermiska dila jeermiska ayaa socon doona maalmaha bandowga si adeegyada guud loo fuliyo iyadoon la carqaladeyn.
DIYAARINTA IYO IFTAR WAA LAGU DIYAARIYAY
Xarunta Taageerada Saadka ayaa sii wadi doonta inay shaqeyso 24 saac maalintii si loo hubiyo in adeegyada guud loo fuliyo si habsami leh iyo in adeegyada guud la sii wadi karo oo la joogtayn karo. Baahiyaha cuntada ee Iftar iyo Sahur waa la diyaarin doonaa lana gaarsiin doonaa 7 shaqaalaha waxsoosaarka dabka iyo kuwa dab damiska 88 jikada dabka.
Xarunta Taageerada Saadka Adeegyada kale ee loo sii wadi doono afar maalmood waa sida soo socota;
- 153 miisaska cad, waaxda xabaalaha, booliska degmada iyo dhammaan shaqaalaha u xilsaaran, iftar, iyo amarrada sahur ayaa loo diri doonaa xafiisyadooda.
- Baahida cunnada iyo cabbitaanka ee muwaadiniintayada ku nool xerada bilaa hoyga ah waa la sii wadayaa in la daboolo.
- Iftar, ilaa 10 oo qof ayaa isu diyaarin doona degmooyinka laga doonayo.
- Adeegyada hoyga waxaa la sii wadi doonaa in la siiyo 32 xirfadlayaal daryeel caafimaad oo ku yaal xarunta bulshada ee Zeytinburnu.
- Baahida cuntada iyo cabitaanka ee xirfadlayaasha daryeelka caafimaad ee ku sugan hoteelada waa la buuxin doonaa.
ALO 153 24 SAACADAHA LAGU HAYO
Xarun wicitaan oo Alo 153 ah, oo gargaar ka bixisa dhammaan dhinacyada Istanbul, ayaa shaqeyn doonta 24-ka saac maalintii oo ah maalmaha bandowga. Tirada shaqaalaha loogu beddeli doono wareegyada waxay noqon doontaa 691.
IMM waxay abaabuli doontaa waxqabadka 19ka Maajo jawiga dijitaalka ah iyadoo ay ugu wacan tahay tillaabooyinka faafa iyo bandooga. Riwaayadaha lagu wadaagayo xisaabaadka warbaahinta bulshada ee Waaxda Dhaqanka ee Hm inta u dhexeysa 16-19 May; Dukumintiga dukumiintiga, filimka iyo tiyaatarka iyo dhacdooyin kale oo badan ayaa u suuragelinaysa dadka deggan Istanbul inay ku raaxeystaan ​​iidda guryahooda.
4-BARNAAMIJKA MAALINTA EE MAALINTA EE KHUDBADAHA ISTANBUL
KHUDBADAHA ISTANBUL, Isniinta, Meey 18, inta u dhaxaysa 21:00 iyo 22:00 @ ıbbsporistanbul aadtube kanaal iyo chess tv adigatube İBB Spor İstanbul Online Chess Tournament Final Night Night ayaa lagu baahin doonaa kanaalkiisa. Ciyaaraha tooska ah ee tooska loo baahiyo, cayaaryahan chess adigutubeSabri Can ayaa ka faalloon doona moderaterka Gürcan Engel iyo Talha Emre Akıncıoğlu. Intaa waxaa u dheer, Renay Onur, Maareeyaha Guud ee shirkadda Spor Istanbul, ayaa marti u ah.
Talaadada, 19ka Maajo, furitaanka Atatürk Kent Orman, kaqeybgalka kooxaha orodka iyo ciyaartooyda qaranka ayaa ka qeyb qaadan doona taageerada isboorti ee Istanbul, Xadiiqooyinka Magaaladda Istanbul iyo Xadiiqadaha loo adeegsado saameynta warbaahinta bulshada.
Adeegyada kale ee ay bixin doonaan kuwa ku xiran İBB ee 16-17-18-19 waa sida soo socota:
Rootida dadweynaha ee Istanbul: Waxay sii wadi doontaa inay si buuxda uga shaqeyso iyada oo leh 3 warshadood, 514 buffooyin iyo 364 shaqaale ah.
SYÖN AŞ: Alaabada Cunnada Badda ee Gürpınar iyo Kadıköy Waxay la adeegsan doontaa 50 shaqaale Suuqa Talaadada.
SBAK AŞ: Saxeexida metroga, nidaamyada calaamadaha, barnaamijyada, dalabka, rakibaadda iyo qalliinka ayaa kusii socon doona 108 shaqaale magaalada oo dhan.
I İSTTELKO: Si loo joogteeyo dhammaan nidaamyada kaabayaasha isgaarsiinta iyada oo aan la carqaladeyn, Data Merkei waxay sii wadi doontaa inay si aan kala go ’lahayn u shaqeyso iyada oo ay jiraan 10 khubaro farsamo, 30 adeegyada WIFI, 8 adeegyada WIFI, 6 adeegyada IT iyo 24 adeegyada adeegyada kaabayaasha.
STGÜVEN AŞ: Inta lagu jiro bandowga 4da maalmood ah, 5 shaqaale ayaa kasii shaqeyn doona 860 goobood.
AĞAÇ AŞ: Iyada oo qayb ka ah dayactirka iyo qorsheynta aagga cagaaran ee Istanbul-oo dhan, 723 shaqaale ah ayaa sii wadi doona shaqadooda 306 gaari.
SPER AŞ: Cusbitalka, Caafimaadka Guriga, Adeegyada Bulshada, Booliska, Baadhitaanka bukaan socodka iyo Daaweynta, İSKİ, Adeegyada Naafada ah, Adeegyada Aaska, Waxqabadka Ilmaha, Dhallinta iyo Ciyaaraha, Xiriirka Dadweynaha, Agaasinka Gobolka, Gurmadka Degdega Hızır, İGDAŞ, La-talinta Qoyska iyo Xarunta Waxbarashada, Agaasinka Howlgalada Waxay sii wadi doontaa inay u adeegto Istanbul iyo deggeneheeda inka badan 4 kun oo shaqaale ah oo ka shaqeeya Adeegyada Qoyska ee Haweenka, Orchestras iyo Tiyaatarka, Dayactirka Xayawaanka Agoonta ah.
Waaxda xabaalaha IMM: Waxay la shaqeyn doontaa ku dhawaad ​​kun iyo 245 shaqaale ah iyo 350 gaadiid adeeg si ay howlahaasi u yareyaan.
Dabdamiska Istanbul: Waxay u adeegi doontaa 849 gaadiid iyo 2 shaqaale ah.
Booliska IMM: Inta lagu jiro bandowga afarta maalmood socdo, 23 kun oo qof, 483 gawaarida iyo 220 koox ayaa ka shaqeyn doona wareegyo, meel fog iyo mid kaleba. Waxay adeegyo ka bixin doontaa aagag badan oo ka mid ah kontaroolada goobaha shaqada ee u sii xirnaan doona kulanka baahiyaha gaadiid ee xirfadleyda daryeelka caafimaad.
Hamidiye AŞ: In kasta oo wax soo saarka iyo shixnadaha ay sii socdaan 4 maalmood, mashiinnada qaar ayaa la soo saari doonaa May 19. Shaqaalaha xafiiska; haddii ay jirto baahi degdeg ah, bandoowgu ma shaqeyn doono maalmahaas. 167 iibiyeyaal ayaa sii wadi doona inay sii shaqeeyaan 263 maalmood iyaga oo leh 760 baabuur iyo 4 shaqaale ah.
Metrobus, Metro iyo Steamboats ayaa 4 maalmood ku shaqeyn doona magaalada Istanbul
Sidee gaadiidka dadweynaha ay ku jiri doonaan Ankara 4 maalmood?